Ku saabsan GRACE - Grace Makiinado CO., LTD
Grace Makiinado CO., LTD
GRACE waxay ku saleysan tahay Jiangsu Shiinaha, waxayna ku haysaa horumarka adduunka oo dhan aragtida. Waxay diiradda saaraysaa wax soo saarka balaastigga ah iyo dib-u-warshadaynta qalabka wax soo saarka, GRACE waa qalab-soo-saare qalab isku-dhafan naqshadeynta, R&D, soo-saarka, iibka iyo adeegga.
Dalalka Daboolka Ganacsiga & Gobollada
Waxaan siinay macaamiil badan oo ka kala socda in ka badan 106 dal iyo gobol wax soo saar iyo adeegyo kala duwan. Waxaan si joogto ah u wadnaa inaan horumarino waxsoosaarkayaga sayniska, teknolojiyadda iyo "Cunsurka Aadanaha" Aragtidayadu waa inaan noqono alaab-bixiye ugu sarreeya alaabada adduunka, oo ku saleysan ruuxa mabda'a, kaliya ma ahan inaan sida ugu fiican uga soo baxno baahida suuqa, iyo sidoo kale inaan sii wadno xoojinta tartankeenna. iyada oo loo marayo si aan kala go 'lahayn ula xiriirida macaamiisha, oo leh khibrad sannado ah oo ku saabsan teknolojiyadda, awoodaha R & D, habka wax soo saarka iyo farsamada caaryada si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha. Waxaan ku faraxsanahay in iyada oo loo marayo iskaashiga macaamiisha, alaabooyinkayagu ay ku sii wadaan hal-abuurnimada xawaaraha dalabaadka kala duwan.
Baadhitaankeenna alaabooyinka xirfadleyda ahi waxay leeyihiin tiro badan oo waayo-aragnimo warshadeed ah oo loogu adeegayo macaamiisha ujeeddada, naqshadeynta iyo soo saaridda badeecadaha waxay ka tarjumaysaa ku habboonaanta macaamiisha iyo baahida suuqa.